Yoɛl 3 ASCB – Joel 3 KJV | Biblica
Yoɛl 3 ASCB – Joel 3 KJV
Aman No Atemmuo
mede Yuda ne Yerusalem ahonyadeɛ bɛsane aba.
na mede wɔn aba Yehosafat bɔnhwa mu.
Ɛhɔ na mɛbu wɔn atɛn
wɔ deɛ wɔyɛɛ mʼagyapadeɛ, a ɛyɛ Israelfoɔ ho,
ɛfiri sɛ wɔbɔɔ me nkurɔfoɔ hwetee aman so,
3Wɔbɔɔ me nkurɔfoɔ so ntonto,
Wɔtɔn mmerantewaa de emu sika bɔɔ adwaman.
Wɔtɔn mmaayewa nso de gyee nsã,
4“Ɛdeɛn na mowɔ tia me, Ao Tiro ne Sidon ne mo Filistia amantam nyinaa? Mopɛ sɛ motɔ me so awere anaa? Sɛ saa na ɛte deɛ a, monhwɛ yie. Mɛyɛ ntɛm, atua mo biribiara a moayɛ no so ka. 5Mofaa me dwetɛ ne me sikakɔkɔɔ ne mʼagyapadeɛ a ɛsom bo, na mosoa kɔguu mo abosonnan mu. 6Motontɔn nnipa a wɔte Yuda ne Yerusalem maa Helafoɔ3.6 Helafoɔ ne Foenikefoɔ dii dwa firi afe 800 A.W.A. sɛdeɛ ɛbɛyɛ a, wɔbɛfiri wɔn asase so akɔ akyirikyiri.
7“Nanso, mɛsane de wɔn afiri baabi a mokɔtɔn wɔn no aba, na deɛ moayɛ no nyinaa, mɛtua mo so ka. 8Mɛtontɔn mo mmammarima ne mo mmammaa ama Yudafoɔ, na wɔn nso atɔn wɔn ama Arabfoɔ, ɔman a ɛwɔ akyirikyiri no.” Me, Awurade, na makasa.
9Mo mpae mu nka yei wɔ aman so:
Monsiesie mo ho mma ɔko!
Momma mo mmarima akofoɔ no ntwe mpini, na wɔn mmɛko.
10Momfa mo mfuntumdadeɛ no mmɔ akofena,
na momfa mo nsɔsɔwa mmɔ mpea.
Ma deɛ wɔayɛ mmerɛ nka sɛ,
mo mmɛboa mo ho ano wɔ hɔ.
Fa wʼakofoɔ bra, Ao Awurade!
12“Wɔnkanyane aman no;
wɔntu ntene nkɔ Yehosafat bɔnhwa no mu,
ɛfiri sɛ ɛhɔ na mɛtena
13Monhwim kantankrankyi no,
ɛfiri sɛ otwa berɛ no aduru so.
Mommra, montiatia bobe no so,
ɛfiri sɛ nsakyiamena no ayɛ ma
na ankorɛ no ayɛ ma abu so.
Saa ara na wɔn amumuyɛ dɔɔso!”
wɔ gyinasie subɔnhwa no mu!
Awurade ɛda no abɛn
wɔ gyinasie subɔnhwa no mu.
15Owia ne ɔsrane bɛduru sum,
16Awurade bɛbobɔ mu afiri Sion,
ne nne bɛgyegye afiri Yerusalem,
asase ne ɔsoro bɛwoso.
Nanso, Awurade bɛyɛ dwanekɔbea ama ne nkurɔfoɔ,
ɔbɛyɛ abandenden ama Israelfoɔ.
Onyankopɔn Nkurɔfoɔ Nhyira
17“Afei, wobɛhunu sɛ, me Awurade, wo Onyankopɔn,
mete Sion, me bepɔ kronkron so.
na ananafoɔ rentu wɔn so sa bio.
18“Saa ɛda no, nsã foforɔ bɛsɔne afiri mmepɔ no mu,
na nufosuo atene wɔ nkokoɔ so;
Nsuo bɛba Yuda nsuwansuwa mu,
na asutire bɛtue afiri Awurade efie,
na agugu akasia subɔnhwa no so nsuo.
19Nanso Misraim bɛdane amanfo,
na Edom nso bɛyɛ anweatam,
ɛsiane awurukasɛm a wɔyɛ de tiaa nnipa a wɔwɔ Yuda enti.
Ɛhɔ na wɔhwiee mogya a ɛnni fɔ guiɛ.
na Yerusalem deɛ wɔbɛtena hɔ awoɔ ntoatoasoɔ nyinaa mu.
21Na mogya afɔdie a memfa nkyɛeɛ no,
Na me Awurade, mɛtena Sion!”
ASCB : Yoɛl 3